Wardegdega: Wiil 17-sano Qorsheynayay inuu MD Farmaajo ku qaarijiyo Garowe oo gacanta lagu dhigay,Gaas oo..? | Garqaad News Agency
Wardegdega: Wiil 17-sano Qorsheynayay inuu MD Farmaajo ku qaarijiyo Garowe oo gacanta lagu dhigay,Gaas oo..?
Ciidamada amaanka Puntland ayaa gacanta ku dhigay ruux loogu shakiyay inuu damacsanaa qaarijinta madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo oo maanta gaaray magaalada Garowe.
Ruuxa la qabtay oo magaciisa lagu soo koobay Axmed Fanax ayaa Ciidamada ay ka shakiyeen mar uu doonayay inuu dad badan oo isugu soo baxay soo dhaweynta madaxweyne Farmaajo ka dhex duso si uu u arko madaxweynaha oo markaasi masraxa soo dhaweynta la saarnaa madaxweynaha maamulka Puntland C/wali Gaas.
Wiilkaan oo da’diisa lagu qiyaasay 17-sano jir ayaa su’aalo dhowr ah oo la weydiiyay ka dib la sheegay in sii daayay markii dadka qaar oo Ciidamada ay yaqaanaan ay bar garteen Wiilka gacanta lagu dhigay.
Ciidamada amaanka ayaa feejignaan dheeri ah ku jiray tan iyo shalay,maadama maanta magaaladaasi uu gaaray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo.
Waa safarkii ugu horeeyay oo madaxweyne Farmaajo ku tago Garowe tan iyo markii 8-bishii february ee sanadkii 2017dii lagu doortay Muqdisho,wuxuuna sidoo kale soo mari doonaa deegaano kale oo dhowr ah.